संक्रमितको उपचारका लागि बीरगन्जमा पहिलोचोटि दिइयो रेम्डेसिभिर औषधी - Nepal Post Daily
संक्रमितको उपचारका लागि बीरगन्जमा पहिलोचोटि दिइयो रेम्डेसिभिर औषधी
बीरगन्ज, २३ साउन- बीरगन्जस्थित कोरोना अस्पतालमा उपचाररत एक संक्रमितलाई पहिलोचाटि रेम्डेसिभिर औषधी दिइएको छ । नारायणी अस्पताल अन्र्तगतको अस्थायी कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितलाई सो रेम्डेसिभिर औषधी दिइएको हो । इन्जेक्सन दिए पश्चात उनको स्वास्थ्य क्रमिक राम्रो सुधार देखिएको चिकित्सक डा. निरज सिंहले बताए । सो रेम्डेसिभिर इन्जेक्सन दिइएका युवक संक्रमित तीन/चार दिनमा डिस्चार्ज हुन सक्ने डा. सिंहले बताए । औषधीको नेपालमा प्रयोग गैरकानुनी भएको भए पनि यसबारे जानकारी दिन कुनै डर र आपत्ति छैन भन्दै डा. सिंहले भने, “अनाधिकारिक रुपमै भए पनि मैले यो औषधी चलाएको हुँ, ज्यान बचाउन चलाएको हौं ।”
हाल रेम्डेसिभिर औषधीलाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको छ । हाल यो औषधी अमेरिका सर्वाधिक रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । विश्वमा उपलब्ध धेरै एन्टी भाइरल डग मध्येको कोरोनामा प्रभावकारी देखिएको एन्टी भाइरल डग हो, रेम्डेसिभिर । विगत डेढ दुई महिना यता देखि छिमेकी देश भारत र बंगालादेशमा पनि यो उपलब्ध रहेको र त्यहाँ पनि प्रयोग भइरहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यद्यपि, यो औषधी नेपालमा भने दर्ता भइसकेको भने छैन । कुनै पनि औषधी काुननी रुपमा बिक्रीवितरणका औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । औषधी बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधीले बताए अनुसार यसका लागि निवदेन दिएको भए पनि हालसम्म औषधी व्यवस्था विभागले अनुमति भने दिइसकेको छैन ।
अहिले आएर बल्ल सरकारले यो औषधी नेपाल ल्याउन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । केही सातादेखि लक्षण देखिएका र आईसीयूमा गएका संक्रमित बढ्दै गएकाले यो औषधि किन्न प्रकिया सुरु भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले बताए । ‘हामीले औषधि व्यवस्था विभागलाई यहाँका व्यवसायीहरुलाई रेमडिसिभिर ल्याउन टेण्डर गर्न भनेका छौं’ डा. पोखरेलले भने, ‘व्यवसायीहरुले ल्याएपछि सरकारले उनीहरुबाटै आवश्यक परेको औषधि लिनेछ ।’ औषधी आयात गर्न चार आयातकर्ताले निवेदन दिएको औषधी व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
डा. निरज सिंह भन्छन्, “जब साउन यता बीरगन्जमा कोरोना संक्रमितहरु जटिल अवस्था आयो, तब प्रयोग गर्ने क्रममा थाहा भयो कि यो औषधी नेपालमा दर्ता नै गरिएको छैन । यस कुराले नेपालमा लकडाउन लगाएर पनि तयारी केही पनि नभएको पुुष्टि भएको उनी बताउँछन् । भेन्टिलेटर, आइसीयु, औषधी लगायतका लागि जुन तयारी गर्नु पर्ने थियो लकडाउन लगाए पनि केही पनि तयारी गरिएन, जुन हास्याँस्पद हो”, डा सिंह भन्छन् ,”रेम्डेसिभिर जुन अहिलेसम्मको प्रभावकारी मानिएको छ, त्यसको प्रयोगका लागि किन स्वीकृति नदिइएको हो, के सोचेर नदिइएको हो, बुझ्न गाह्रो छ ।”
औषधी व्यवस्था विभागले यो औषधी दर्ता गरेर तुरुन्त स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने चिकित्सकहरुको तर्क छ । अन्यथा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका व्यक्तिहरुको अकालै ज्यान जाने चिकित्सकहरु बताउँछन् । आधिकारिक रुपमा स्वीकृति नदिईदा यस औषधीको तस्करी भइरहेको छ । जसले गर्दा अलिकति आर्थिक अवस्था सबल भएका व्यक्तिहरुले पनि महंगो मुल्यमा सो औषधी किन्न बाध्य भएका छन् । भारतमा मात्र भारु पाँच हजारमा पाइने रेम्डेसिभिर तस्करहरुबाट नेरु ४० देखि ५० हजारसम्म तिरेर बिरामीका आफन्तहरुले किन्न बाध्य भएको डा. सिंहले बताए । तसर्थ, यो औषधी रजिस्टर गरेर आयात गर्ने हो भने नेरु ८ हजारमै सबैले किन्न सक्ने गरी उपलब्ध हुने र धेरैको ज्यान बचाउन सकिने उनले बताए ।
साउन यताका अधिकांशको मृत्यु कोरोनाकै कारण
बीरगन्जमा साउन यता मृत्यु भएका व्यक्तिहरुमध्ये अधिकांशको मृत्यु कोरोना भाइरसकै कारण भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । चिकित्सकहरुले गरेको निदान अनुसार साउन महिना यता मृत्यु भएका व्यक्तिहरुमध्ये एक दुई जना बाहेक अन्य सबैको कोरोना कै कारण ज्यान गएको हो । बाँकी एक दुई जनाको मृत्यु कारणबारे भने कन्फ्युजन रहेको डा. निरज सिंहले बताए । साउन महिनामा मात्र हालसम्म(साउन २२ गतेसम्म) १५ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकहरुमध्ये केही व्यक्तिमा मृत्यु पश्चात संक्रमण पुष्टि भएको छ भने केही व्यक्ति भने कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पश्चात उपचाररत रहेका थिए ।
प्लाज्मा निकाल्न ब्लड बैंकलाई अनुमति दिएपछि प्लाज्मा थेरापी पनि शुरु हुन्छ
नारायणी अस्पतालले संक्रमितको उपचारका लागि वरदान हुन सक्ने प्लाज्मा थेरापी उपचार पद्धति चाडैं नै शुरु गर्ने भएको छ । यसअघि, नेपाल सरकारले नारायणी अस्पताललाई यो उपचार पद्धति शुरु गर्न अनुमति दिइसकेको छ । तर नारायणी अस्पताल आफैसँग भने रगतबाट प्लाज्मा निकाल्ने प्रविधि नभएको अस्पतालका चिकित्सक डा. निरज सिंह बताउँछन् । “कसैले रगतबाट प्लाज्मा निकालेर लिएर आउँछ भने हामी संक्रमितको शरिरमा प्लाज्मा हालेर उपचार तत्कालै शुरु गर्न सक्छौं तर प्याज्मा निकाल्न भने नारायाणीसँग प्रविधि छैन”, उनले भने । यद्यपि, बीरगन्जस्थित ब्लड बैंकसँग भने रगतबाट प्लाज्मा निकाल्ने प्रविधि र प्रविधि दुवै रहेको डा. सिंहले बताए । “ब्लड बैंकलाई स्वीकृति दिन सम्बन्धित निकायलाई खबर गरेको छु, आशा गर्दैछु, आजभोलि मै केही हुन्छ कि !” उनी बताउँछन् ।
तर जबसम्म डोनरहरु तयार हुदैंनन् तबसम्म यो उपचार पद्धति शुरु गर्न सम्भव नभएको डा. सिंहले बताए । डोनरहरुले(निको भएर घर फर्केका संक्रमित) साथ दिएको खण्डमा यो उपचारबाट धेरै संक्रमितलाई बचाउन सकिने उनले बताए । छिमेकी देश भारतमा यस उपचार पद्धतिको प्रयोग भइरहेको र लाभदायक परिणाम पनि आइरहेको डा. सिंहले सुनाए । पर्सामै संक्रमण पुष्टि भएर पनि निको भई घर फर्केकाहरुको संख्या देशभरमै धेरै भएकोमा पर्सा प्लाज्मा थेरापी शुरु गर्न सबल हुन सक्ने डा. सिंहले बताए । डोनरहरुलाई अनुरोध गर्दै उनले भने, “अहिले पर्सामा घर घरमा संक्रमित छन्, यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले रक्तदान गरिदिनु भयो भने धेरैकोे जीवन बचाउन सकिन्छ जुन एकदमै ठूलो पुण्यको काम हो ।”
(नेपाल पोष्ट डेलीका सम्पादक अशोक संग्रौलाले रेडियो सान्भीका लागि कार्यक्रम “सवाल जवाफ”मा डा. निरज सिंहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
अन्तर्वार्ता सुन्न यो लिंक क्लिक गर्नुहोस्
अन्तर्वार्ता सन्नुस् यहाँ किल्क गर्नुस्
Previous articleमोबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहीन हुने संक्रमित बढ्दै
Next articleनारायणी अस्पतालकाे आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा रोक्ने कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु : उच्च अदालत